3 သင်တန်းများ Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု Professional ကသင်တန်း PMP စွဲခံရဖို့
27 ဒီဇင်ဘာ 2016
Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု Professional က (PMP) တကမ္ဘာလုံးစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (PMI) ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတ်မှတ်ရေးပူဇော်သက္ကာကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်လက်ရှိ 729,552 တက်ကြွရှိပါတယ်သိကြ PMP သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီ & 284 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 210 ကျော်နိုင်ငံများတွင် & နယ်မြေများကိုဖြတ်ပြီးအခန်းကြီးစင်းလုံးငှား။ ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions ပူဇော်သက္ကာကို (Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု Professional က) Gurgaon, Noida အတွက် PMP သင်တန်း, ဒေလီ nCr, အိန္ဒိယ, အမေရိကန်, ဗြိတိန်နှင့်သြစတြေးလျအတွက်9မြို့ကြီးများထက်ပို accross ။ ၎င်းတို့အားလည်းအွန်လိုင်းသင်တန်းများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစာရင်းသွင်းရန်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Professional ကသင်တန်း၏အွန်လိုင်းသင်တန်းပေးထားပါတယ်။
Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု Professional ကလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ
1 ။ Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု Professional က (PMP)
အဘယ်သူသည် Apply သငျ့သလော
သင့် PMP Choose နှင့်လေ့ကငျြ့
2 ။ Program ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု Professional က (PgMP)
တက် Pick နှင့်သင့် PgMP ထိန်းသိမ်းပါ
3 ။ Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုတွဲဘက် (CAPM)
တက် Pick နှင့်သင့် CAPM ထိန်းသိမ်းပါ
အဆိုပါစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Professional က (PMP) စီမံကိန်းကိုကြီးကြပ်ရေးမှူးများအတွက်အများဆုံးရအရေးကြီးသောစက်မှုလုပ်ငန်း-ရိပ်မိလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျမဟုမှာအားလုံးတိကျတဲ့ဘူမိဗေဒသို့မဟုတ်ဧရိယာအာရုံစိုက်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်နှင့်တူနီးပါးမြိုးမြိုးတို့တှငျစီမံကိန်းများကိုကားမောင်း PMPs နှင့်, discover နိုငျသညျ, ထိုPMP®ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစစ်မှန်စွာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး PMP အဖြစ်, သင်သည်မည်သည့်စနစ်နှင့်မည်သည့်ဧရိယာထဲမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မဆိုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ PMP ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့လေးလည်းအလားအလာချဲ့ထွင်။ Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုလစာစစ်တမ်း, နဝမအကြိမ်မြောက် Edition ကို: PMP လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူ 20 ပါဝါဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်၎င်းတို့၏ Non-လက်မှတ်အပေါင်းအသင်းထက်ရာခိုင်နှုန်းပိုဆည်းပူး။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်း။ သူတို့စီမံကိန်းအကြီးအကဲများထက်ပို 33% PMP-လက်မှတ်အခါအမှတ်မှာ, အသင်းအဖွဲ့များအစီအစဉ်ကိုဖြုန်းခြင်းနှင့်ထူးခြားသောရည်ရွယ်ချက်များတွေ့ဆုံအပေါ်, အချိန်အပေါ်၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောငွေပမာဏကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။ (ထိုProfession®လေ့လာမှု, PMI, 2015 ၏ဘိ။ )
အဆိုပါ PMP သငျသညျစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စကားပြောဆိုခြင်းနှင့်နားမလည်ကြောင်းကြူးသနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, အသင်းအဖွဲ့များနှင့်အထူးကုတစ်ဦးအုပ်စုသငျသညျဆက်စပ်ဖော်ပြထားသည်။ တစ်ဦး PMP သို့လှည့်များနှင့်ပရောဂျက်သူတော်စင်သို့လှည့်။
သငျသညျ Cross-utilitarian အုပ်စုများမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်း, စီမံကိန်းအတွက်စီးအနင်းအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုတာဝန်ခံတစ်ဦးအောင်မြင်သောစီမံကိန်းတစ်ခုစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုနေကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထို့နောက် PMP သင်တို့အဘို့မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါလက်မှတ်စာမေးပွဲ 200 ကွဲပြားခြားနားသောဆုံးဖြတ်ချက်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပြီး, သင်ကပြီးအောင်မှလေးနာရီရှိသည်။
သင့်ရဲ့ PMP တက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, သင်မရောက်နဲ့တူ 60 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုးတက်မှုယူနစ် (PDUs) အနိုင်ရသင့်ပါတယ်။
program တစ်ခုကြီးကြပ်ရေးမှူးအဖြစ်, သင်သည်သင်၏အသင်းအဖွဲ့ရဲ့အရေးပါသောအရည်ရွယ်ချက်များ propelling ၏သွေးထွက်အစွန်းပေါ်မှာအကြီးတန်း-Level ကျွမ်းကျင်သူပါပဲ။ သင်ကစီမံကိန်းများကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဆိုပါကဖြစ်ပျက်မဟုတ်နိုင်ကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြီးမြောက်, coordinatedly အမျိုးမျိုးသော, related စီမံကိန်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။
သင့်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆာဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူတစ်အသင်းအဖွဲ့ရဲ့စီမံကိန်းများကိုသိသိသာသာပိုပြီးအသီးအနှံများကြောင့်မပါဘဲထက်များမှာ - 76 ရာခိုင်နှုန်းကိုProfession®အစီရင်ခံစာ၏နောက်ဆုံးနှစ်တွင် Pulse နှုန်းအဖြစ် 54 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်စီမံခန့်ခွဲမှု Professional က (PgMP) ®သင့်ရဲ့ propelled နားလည်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုသိသာအရိပ်အယောင်သည်နှင့်သင်အလုပ်နှင့်တိုးတစ်ခုတွေကမှားစရာအဆင်သင့်အနေအထားပေးသည်။
သင်အလားအလာ PgMP နေပြီးတော့, အမျိုးမျိုးသော, related စီမံကိန်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စွမ်းရည်, အသင်းအဖွဲ့များ, ဒေသများသို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းခရီးလှညျ့လနှင့် hierarchical ရည်ရွယ်ချက်များမှရလဒ်များကိုကိုထိန်းညှိဖို့ကြောင်းရှုပ်ထွေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုစူးစမ်းဖို့သရုပ်ပြစွမ်းရည်ရှိသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်မှာ။
အဆိုပါလက်မှတ်စာမေးပွဲ 170 မြောက်မြားစွာဆုံးဖြတ်ချက်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပြီး, သင်ကပြီးအောင်မှလေးနာရီရှိသည်။
သင့်ရဲ့ PgMP တက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, သင်ပုံမှန်ကြားကာလမှာ 60 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုးတက်မှုယူနစ် (PDUs) ဆည်းပူးသင့်ပါတယ်။
သို့မဟုတ်အတူ - - စီမံကိန်းအတွက်အုပ်စုများသည်သင်၏အလုပ်အကိုင်စည်းရုံးနေသော်လည်းစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လက်မှတ်ရတွဲဘက် (CAPM) ®အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်တွင်သင်သည်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်တာသင့်ရဲ့တရားဝင်မှုနှင့်လုံလောက်မှုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်။
Profession®အစီရင်ခံစာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်း Pulse ၌ထငျရှားအဖြစ်ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအလေ့အကျင့်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များ, ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေပြီးမြောက်။ အဆိုပါCAPM®အဆိုပါခေါ်ဆိုမှုရဲ့လွှမ်းမိုးသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစံသို့သင့်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ရိပ် မိ. ကတည်းကသင်သည်အကြီးအကဲတွေမှပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်တွန်းအားပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်။ 2020 မှတဆင့် 1.57 သန်းအသစ်များကိုအလုပ်အကိုင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလုပ်မည်ဖြစ်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီပညာရှင်များဆည်းကပ်နေကြသည်။ အဆိုပါ CAPM နှင့်အတူ, သငျသညျအခြေအနေမျိုးမှအောင်မြင်မှုရဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျပိုကြီးစီမံကိန်းများကြီးကြပ်နှင့်သင့်ပစ္စုပ္ပန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်တာဝန်ဆည်းပူးသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းရန်အခွင့်အလမ်းမှာခုန်ချင်ပါတယ်သောဖြစ်ရပ်အတွက်, ထို့နောက်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လက်မှတ်ရတွဲဘက် (CAPM) သင်တို့အဘို့အသင့်လျော်သည်။
အဆိုပါလက်မှတ်စာမေးပွဲ 150 အမျိုးမျိုးသောဆုံးဖြတ်ချက်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပြီး, သင်ကပြီးအောင်မှသုံးနာရီရှိသည်။
သင့်ရဲ့ CAPM တက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, သင်မရောက်တူသောစာမေးပွဲပြန်လည်ယူသင့်ပါတယ်။